Fulkaanaha Etna ayaa qarxay | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ku taal xeebta bari ee Sicily (Talyaaniga), waxaan ka helnaa mid ka mid ah fulkaanaha ugu caansan Qaaraddii Hore: Etna. Markasta oo yar ayuu qarxayaa, mararka qaarkood sanad kasta. Markii ugu dambeysay ee uu sameeyo waxay ahayd habeenimadii Isniinta ee la soo dhaafay.
Bandhigga waxaa laga arki karaa magaalada Catania, oo dhowr kilomitir u jirta volcano. Waqtigaan la joogo, wax khatar ah kuma lahan dadka iyo guryahooda.
1 Qarax Fulkaanaha Etna
2 Taariikhda fulkaanaha
Qarax Fulkaanaha Etna
27-kii Febraayo, 2017 Etna waxay kordhisay dhaqdhaqaaqeeda fulkaanaha, iyo ilaa dhammaadkii maalintii ayuu qarxay, isagoo dambas ka saaraya godka ku yaal dhinaca woqooyi-bari, sida lagu soo warramey Nunziata di Mascali Observatory Meteorological Observatory, kaas oo bilaabay inuu soo saaro daruur cufan.
Hada waxaa jira kaamerada Skyline webcam oo si toos ah u duubeysa. Waxaad arki kartaa iyada oo wax qabaneysa halkan guji (Waxaad u baahan tahay inaad haysato nooca ugu dambeeya ee Adobe Flash Player oo rakibay).
Fulkaanaha Etna, kan ugu firfircoon Yurub, wuxuu leeyahay joog sare oo ah 3330 mitir oo ka sarreeya heerka badda iyo waxay bilaabeen waxqabadkooda qiyaastii nus milyan sano ka hor, iyadoo qaraxyo ay ka qarxeen badda dusheeda, xeebta waxa maanta loo yaqaan Sicily. Waxqabadka fulkaanaha ee ka sarreeya dusha sare ee badda wuxuu bilaabmay 300.000 sano ka hor, waxyarna tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayuu u dhisay illaa heerka uu maanta marayo.
Waxqabadka volcano waligeed isku mid ma aha. Mararka qaarkood qarxyadu waxay ku dhacaan shirarka marna dhinacyada. Kuwii hore waa kuwa ugu qarxiska badan, laakiin marar dhif ah ayay khatar galiyaan; dhinaca kale, kan dambe wuxuu ku dhici karaa xitaa dhowr boqol oo mitir oo joog ah, ama ku dhow meelaha dadku ku badan yahay. Ilaa 1600 AD. C., waxaa jiray 60 qarax oo dhinaca dambe ah iyo tiro aan la tirin karin oo ka dhacay shirkii.
Fulkaanaha Etna wuxuu abuuray muuqaal cajiib ah, miyaadan u malayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Fulkaanaha Etna ayaa qarxay
Abuurka diida isbedelka cimilada